.ချစ်သူရည်းစားထက်တောင် ပိုပြီးဂရုတစိုက်နဲ့ နွေးထွေးမှုပရိသတ်တွေကြောင့် နေ့ရက်တိုင်းမှာ ပျော်ရွှင်နေရကြောင်း ရင်ဖွင့်ပြောပြလာတဲ့ သဇင်ထူးမြင့်. – Askstyle
.ချစ်သူရည်းစားထက်တောင် ပိုပြီးဂရုတစိုက်နဲ့ နွေးထွေးမှုပရိသတ်တွေကြောင့် နေ့ရက်တိုင်းမှာ ပျော်ရွှင်နေရကြောင်း ရင်ဖွင့်ပြောပြလာတဲ့ သဇင်ထူးမြင့်.
ပရိသတ္ေတြ ရဲ႕ အခ်စ္ေတာ္ သရုပ္ေဆာင္ ခင္လႈိင္ ရဲ႕ သမီးငယ္ေလး သဇင္ထူးျမင့္ဟာ ဆိုရင္ အကယ္ဒမီ ေရႊႀကိဳမယ္အျဖစ္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရာကေန အႏုပညာလမ္းေၾကာင္းမွာ ေလၽွာက္လွမ္းလာခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ သဇင္ထူးျမင့္ကေတာ့ စကားေျပာနည္းျပီး အေနအထုိင္ေအးေဆးသူေလးျဖစ္ေပမယ့္ အနုပညာအလုပ္ေတြ လုပ္ကိုင္လာခ်ိန္မွာေတာ့ အရင္ကထက္ ပိုျပီး သြက္လက္လာတာ ပရိသတ္ၾကီး သတိထားမိၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။ သဇင္ထူးျမင့္ကလည္း သူမကို အနုပညာလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုေပၚေရာက္ဖို့ အားေပးလာၾကတဲ့ ပရိသတ္ေတြအတြက္ အလုပ္ေတြကို ဖိဖိစီးစီးနဲ့ ၾကိဳးစားလုပ္ကိုင္ေနလ်က္ရိွပါတယ္။
လက္ရိွမွာလည္း Double Dating ဆိုတဲ့ အစီအစဥ္ေလးမွာ ပါဝင္ရိုက္ကူးေပးေနတဲ့ သဇင္ထူးျမင့္က ပရိသတ္ေတြရဲ့ အားေပးမႈကို အခိုင္အမာရရိွေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Double Dating Fan ေတြကလည္း သဇင္ထူးျမင့္ကို အရမ္းခ်စ္ျပီး အရိပ္တၾကည့္ၾကည့္ဂရုစိုက္ေပး၊ လက္ေဆာင္ေတြ ေပးၾကတာေၾကာင့္ “DD Fan ေတြရဲ့ ေႏြးေထြးမႈ ဂရုစိုက္မႈေတြနဲ့ ေန့တိုင္းေပ်ာ္ေနျပီ.. “ဆိုျပီး ေက်းဇူးတင္စကားေျပာလာတာကို ေတြ့ရပါတယ္။
သဇင္ထူးျမင့္ကေတာ့ ခ်စ္သူရည္းစားထက္ေတာင္ ပိုျပီးဂရုတစိုက္နဲ့ ေနြးေထြးမႈပရိသတ္ေတြေၾကာင့္ ေန့ရက္တုိင္းမွာ ေပ်ာ္ရႊင္ေနရေၾကာင္း ရင္ဖြင့္ေျပာျပလာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ၾကီးကလည္း သဇင္ထူးျမင့္ကို ပိုခ်စ္ျပီး ပိုအားေပးၾကပါဦးေနာ္။ ဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ Cele Connections ပရိသတ္ႀကီးအားလုံး သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ ေန႔ေလးတစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
ချစ်သူရည်းစားထက်တောင် ပိုပြီးဂရုတစိုက်နဲ့ နွေးထွေးမှုပရိသတ်တွေကြောင့် နေ့ရက်တိုင်းမှာ ပျော်ရွှင်နေရကြောင်း ရင်ဖွင့်ပြောပြလာတဲ့ သဇင်ထူးမြင့်
ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အချစ်တော် သရုပ်ဆောင် ခင်လှိုင် ရဲ့ သမီးငယ်လေး သဇင်ထူးမြင့်ဟာ ဆိုရင် အကယ်ဒမီ ရွှေကြိုမယ်အဖြစ် ပါဝင်လုပ်ဆောင်ရာကနေ အနုပညာလမ်းကြောင်းမှာ လျှောက်လှမ်းလာခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ သဇင်ထူးမြင့်ကတော့ စကားပြောနည်းပြီး အနေအထိုင်အေးဆေးသူလေးဖြစ်ပေမယ့် အနုပညာအလုပ်တွေ လုပ်ကိုင်လာချိန်မှာတော့ အရင်ကထက် ပိုပြီး သွက်လက်လာတာ ပရိသတ်ကြီး သတိထားမိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ သဇင်ထူးမြင့်ကလည်း သူမကို အနုပညာလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်ရောက်ဖို့ အားပေးလာကြတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် အလုပ်တွေကို ဖိဖိစီးစီးနဲ့ ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေလျက်ရှိပါတယ်။
လက်ရှိမှာလည်း Double Dating ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်လေးမှာ ပါဝင်ရိုက်ကူးပေးနေတဲ့ သဇင်ထူးမြင့်က ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Double Dating Fan တွေကလည်း သဇင်ထူးမြင့်ကို အရမ်းချစ်ပြီး အရိပ်တကြည့်ကြည့်ဂရုစိုက်ပေး၊ လက်ဆောင်တွေ ပေးကြတာကြောင့် “DD Fan တွေရဲ့ နွေးထွေးမှု ဂရုစိုက်မှုတွေနဲ့ နေ့တိုင်းပျော်နေပြီ.. “ဆိုပြီး ကျေးဇူးတင်စကားပြောလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
သဇင်ထူးမြင့်ကတော့ ချစ်သူရည်းစားထက်တောင် ပိုပြီးဂရုတစိုက်နဲ့ နွေးထွေးမှုပရိသတ်တွေကြောင့် နေ့ရက်တိုင်းမှာ ပျော်ရွှင်နေရကြောင်း ရင်ဖွင့်ပြောပြလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးကလည်း သဇင်ထူးမြင့်ကို ပိုချစ်ပြီး ပိုအားပေးကြပါဦးနော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။